Kudzoka & Shanduko: Mazuva makumi mashanu ekudzoka kana Shanduko - MediaLight Bias Lighting
Kudzoka & Shanduko: Mazuva makumi mashanu ekudzoka kana Shanduko
Aya ndiwo marongero ekudzoka kwewebhusaiti yedu yeUSA. International dealers gona vane mitemo yakasiyana-siyana yekudzorera. Kana iwe wakatenga kubva kune imwe webhusaiti, iwe unofanirwa kudzokorora marongero ekudzoka kweiyo saiti. Nekudaro, maodha ekuvhenekesa epasi rose akafukidzwa pasi peMediaLight kana LX1 Warranties zvisinei kuti anotengeswa kupi (ingova nechokwadi chekuti une invoice).
Kana iwe ukasangana nedambudziko neMediaLight yako, dambudziko rega rega rakafukidzwa pasi pekunzwisisa kwedu 5 gore garandi. Nekudaro, pamwe iwe wanga usinga zive zvawakaraira kana kudzorera yako TV uye hauchadi MediaLight yako.
Iwe haudi chikonzero chekudzorera yako MediaLight kuti udzorere, uye hapana mari yekudzosazve, zvisinei, isu dzimwe nguva tinobvisa zvinhu zvisipo kana zvinhu zvakawanda zvikashandiswa uye zvodzoserwa mumamiriro asinga shande (Ndokumbira kuti utibate isu kuitira ruzivo rwekuyera pane kuyedza pamasayizi akawanda!) Iyi fizi yakanyorwa pazasi peji rino.
Haufanire kupa chikonzero chekudzoka, asi uchidaro:
1) Inogona kukurumidza kudzosera yako sezvo ichitichengetedza imwe nguva mukuyedza chinhu chakadzoserwa
2) Ngatitendere isu kugadzirisa dambudziko rako kana kudzoka kuri nekuda kwekutadza kushanda kana kuisa nyaya
Ndokumbira utibate kuti tigamuchire nhamba yemvumo yekudzosa (RMA) yekunyora pasuru. Kudzoserwa kusina mvumo pasina RMA kungave kwakaoma kuenzanisa nekuraira, zvichikonzera kurasikirwa kwechinhu uye chero mari yaungave uine kodzero. Ndapota ziva kuti kutumira hakudzoserwe uye isu hatibhadhare kudzoka kutumira. Zvakadaro, kana muchida kuti tikutumirei tsamba yekukudzoserai, tinofara kuita saizvozvo uye tichabvisa mutengo kana mari yadzorerwa.
Mukuenderana nemaindasitiri zviyero, Blu-ray discs uye zvakapakirwa midhiya, kana yangovhurwa, hazvikodzeri kudzorerwa. Saizvozvo, kurodha pasi hakukodzeri kudzoserwa. Akakanganisika kana akaremara madhishi ari nguva dzose inokodzera kuchinjana.
Mwenje dzese dzakarerekera dzinokodzera kuchinjirwa mahara.
Muchiitiko chekushaikwa kwezvinhu, kana zvakanyanyisa uye / kana nemaune kukanganisa kuchigadzirwa chedu, tinochengeta kodzero yekubvisa mubhadharo wekudzorera unosvika zana muzana wekukosha kwechinhu chakadzoserwa. (Rondedzero izere yezvikamu zvisipo uye yavo yekuwedzera mubhadharo wekubhadhara inogona kuwanikwa pazasi peji rino).
Kana chimwe chinhu chikadzorerwa chisina kushandiswa kana chisina kuvhurwa, hapana mari yekudzoreredza. Ingokumbira RMA-U (RMA yezvinhu zvisina kuvhurwa) uye wotumira iyo kumashure.
Ndokumbira uve nechokwadi chekushandisa nzira ine yekutevera, uye chengetedza chinhu chacho mushe mailer. Hatisi kuzodzosera mari kana chinhu chisina kugamuchirwa kana "chikadonha" muhomwe yacho. Usango namatira chitambi kune yakavhurwa MediaLight kana LX1 package.
Kana usina chokwadi nezvekuti unoda kushandisa here kana kuisa mwenje zvachose, ndapota usabvisa tsvuku yekunamatira inotsigira uye usacheke mutsetse. Shandisa masking tepi kana imwe tepi yekunamatira tepi kuyedza iyo yekumisikidza usati waita kune yekuisirwa. Hatisi kuzobhadharisa fizi kana iwe ukabvisa mwenje paTV yako, asi isu takazvipira kudzikisa marara.
Zvimwe zvekudzoreredza mari yezvinhu zvinoshayikwa kana zvevatengi zvakakanganisika (izvi mhosva zvinowedzerwa pamitero yedu yekudzosazve uye zvinoenderana nemitengo yedu yezvinhu izvi kana yatengeswa yega):
Remote control uye / kana dimmer: $ 10
.5m kana 4ft yekuwedzera: $ 5
USB Chinja: $ 4.00
MediaLight Strip: Hapana kudzoserwa kunze kwekunge kwadzoserwa
Kupotsa MediaLight uye LX1 zvipenga zvikamu: Yakashongedzwa, zvichibva pamutengo wekutenga.